Rakotra Boky Mahagaga Aniko | Famoronana an-tserasera
Aniko no Ohatra tantara momba ny fahitanao ny nofinao ary hahafahanao manao izany rehefa manana tsindry avy amin'ny lafy samihafa ianao izay saika manery anao handalina zavatra izay tsy dia jerenao loatra na tsy tianao.
Mpanakanto iray izay natokana tanteraka ankehitriny mamorona fonony manokana miaraka amina lohahevitra mifantoka amin'ny nofinofy Ary hatramin'ny nanehoany ny asany tamin'ny tranonkala an-tserasera isan-karazany dia nilatsaka ny orana mba ho be atao mandritra ny enim-bolana manaraka.
Mpianatra maritrano, dia miasa amin'ny studio famoronana isan-karazany mandra-pahatongany sady tsy fohy no tsy kamo, dia nanandrana ny iray tamin'ny filan'ny nofo izy ary tsy iza izany fa ny famoronana ireo fonony mahatalanjona ho an'ireo karazana boky rehetra izay misy ifandraisany amin'ny nofinofy.
Miaraka amin'ny lohahevitra miharihary izay isehoan'ny karazan-biby isan-karazany toy ny zirafy, amboahaolo na dragona zazakely aza dia mampiseho fahaiza-manao lehibe hamela antsika ho gaga amin'ny asany tokoa i Aniko. Miasa tokoa ny loha, ny an'ny vorondolo, hahazo anao variana mandritra ny fotoana fohy, satria mamoaka kalitao tena tsara ary mahasambotra anao amin'izany fijery izany aza.
Nentin'i Aniko teo amin'ny fonon'ny boky a sary sokitra tanimanga izay miavaka hamorona fanontana manokana izay mety ho tonga lafatra ho fanomezana ho an'ny olon-tiana. Betsaka ny sanganasa ananany ary amin'ny tsirairay dia azontsika atao ny mampisaintsaina ny masony amin'ny antsipirihany sy hoe inona no mahaforona kanto.
Avelako ianao ny Etsy anao mba hankasitrahanao ny ambiny, fa ny marina dia izay sarotra ny misafidy ankafizinao, satria na ny soavaly aza dia tsara tarehy fotsiny. Asa lehibe amin'ny antsipiriany toy ny karazana firavaka voaravaka, na ny vokatra omeny, izay mahavita mametraka ny dantelina.
Ho an'ny faritra hafa fa ao anatin'ny nofinofy dia azonao atao ny manatona mankany Amundsen.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Manarona ny boky manokana an'i Aniko